Guddoomiyihii iyo ku xigeenkiisii deegaan hoos taga Balcad oo la dilay – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Nov 13, 2019
Wararka aan ka heleyno deegaanka Cadayga oo hoos taga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku waramaya in halkaas lagu dilay guddoomiyihii deegaankaas iyo ku xigeenkiisa, kadib markii koox hubeysan ay xalay saq dhexe lagala baxay hoygii ay ka deganaayeen degaankaas.
Xubno ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa noo xaqiijiyay in falkaas ay geysteen koox aan wali hoybtooda la garan, waxaana lagu kala magacaabi jiray labada marxuum Cabdulle Xasan Xaaji oo ahaa guddoomiyihii deegaanka iyo ku xigeenkiisii Cilmi Qooje Xasan.
Toogashada masuuliyiintaan ka tirsanaa maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka dhacday saqdii dhexe ee xalay meel duleedka ka ah deegaanka Cadayga oo ay ka ahaayeen maamulkii ugu sareeyay.
Ciidamo ka tirsan kuwa Milatariga Soomaaliya ayaa la sheegay inay saaka gaareen halkaas, isla markaana ka bilaabay baaritaano lagu baadi goobayo kooxihii ka dambeeyey falka lagu khaarajiyay labadaas masuul, waxayna dhacdadaan arga-gax ku abuurtay dadka ku nool deegaanka Cadayga ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Sawirro:- Gurmadkii ugu balaarnaa oo maanta ka baxay Garowe iyo Dani oo ka hadlay